सहकारी परिचय [Coop Introduction] | Nepal's No.1 Co-operative News Portal | Page 3
Home सहकारी परिचय [Coop Introduction] (Page 3)
काठमाडौं । “गरिबी न्यूनीकरणका लागि सबल ग्रामीण संस्था निर्माण ” भन्ने नाराका साथ राजधानीमा आयोजित प्रथम साना किसान सम्मेलन १९ बँुदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सोमबार सम्पन्न भएको […]
· साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. र यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाहरूले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायसम्म वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गरी गरिवी न्यूनीकरण र सामाजिक पुँजी निर्माणको बृहत् […]
काठमाडौं। आगामी आइतवारबाट दुई दिने साना किसान सम्मेलन २०१४ हुने भएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले गरिब तथा विपन्न वर्गको उन्नतीको लागि स्थानियस्तरमा साझा संस्था निर्माण गर्ने […]
निजी विद्यालयलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । निजी विद्यालयलाई क्रमशः सहकारी वा गुठीमा ल्याउने गरी सरकारले आगामी दिनमा कम्पनीअन्तर्गत निजी (संस्थागत) विद्यालय खोल्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि अड्किएको […]
जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरमा सहकारी संवर्धन केन्द्र निर्माणको लागि ४.१८३ करोड भारतीय सहयोग
ललितपुर । जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरमा सहकारी संवर्धन केन्द्र निर्माण हुने भएको छ । उक्त केन्द्र निमार्णका लागि भारतीय राजदूतावास काठमाडौं, जिल्ला विकास समिति ललितपुर र जिल्ला सहकारी […]
इलाम। डिभिजन सहकारी कार्यालय इलामले पहिलो पटक इलाममा रहेका ५ वटा सहकारीको विधिवत रुपमा एकिकरण गरेको छ । इलामकै उत्तरी पुवामझुवा गाविसमा रहेर विभिन्न उद्देश्य लिइ संचालनमा रहेका […]
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफै अनुगमन गर्दै अाएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सौतेनी व्यवहार देखाएको छ । गत वर्षहरुमा झै यस वर्षको दशैमा पनि बैंकले राष्ट्र बैंकलाई नयाँ […]
प्युठान । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्युठानले जिल्लाका दुई गाविसमा मौरी र केराका लागि नमुना गाउँ निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको बाङ्देशाल गाविसमा केराका […]
काठमाडौं । नेपालको सहकारी इतिहासमा पहिलो पल्ट विभिन्न उद्देश्यीय र भोैगोलिक अबस्थामा रहेका ९ सहकारी स‍स्था मर्ज भएका छन् । मर्ज पछि ति सहकारी संस्थाको म‌गलबारबाट हाम्रो ‘सगरमाथा […]
नेत्रप्रसाद घिमिरे प्रत्येक सहकारीको एक साधारण सभा हुन्छ । संस्थामा बचत जम्मा गर्ने, संस्थाबाट कर्जा लैजाने तथा संस्थासँग कारोवार गर्ने सबै सदस्यहरु साधारण सभाको सदस्य हुन्छन् । साधारणसभा […]
– राजेन्द्र पौड्याल पूनरावलोकन प्रारम्भकालमापूर्वाधारको कमि, साधन स्रोतको कमि र सहकारीताका संबन्धमा अपेक्षित ज्ञानको अभाव नैराष्ट्रिय सहकारी संघको विकासका वाधक थिए । समय क्रमसँगै नेपालमा धेरै सँख्यामा सहकारी […]
अन्तत चुनावनै हुने भो राष्ट्रिय संघमा, ८३ जनाको उम्मेदवारी
ललितपुर, २३ साउन । राष्ट्रिय सहकारी संघको नेतृत्व कसले लिने भन्ने पटक पटकको वार्ता असफल भएपछि अन्तत चुनाव हुने निश्चित भएको छ । निर्वाचन प्रक्रियाको लागि ८३ जना […]
को कहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्दैछन् राष्ट्रिय संघमा ? (सम्पूर्ण नामावली सहित)
दिपक प्रकाश बाँस्कोटा, अध्यक्षका प्रत्यासी राष्ट्रिय सहकारी संघको नेतृत्वलाई कसरी सर्वसम्बत गर्ने भन्ने विषयमा लागि रहेका छौं । हाम्रो मुख्य एजेण्डा पनि यही हो । म यहि एजेन्डाको […]
“बिषादीमुक्त” गाविस बनाउन सहकारीको पहल
सन्तोष तिमल्सिना काभ्रे, १२ साउन । जिल्लाको ढुंखर्क गाविसलाई सहकारीको माध्यमबाट खुल्ला विषादीमुक्त गाविस घोषणा गर्ने अभियानमा यहाँ युवा किसानहरु लागिपरेका छन् । पछिल्लो समयमा तरकारीखेतीमा बिषदी प्रयोग […]
“नुन चुक” छर्दै सरकार र सहकारी अभियान
काठमाडौ । कहिले सहकारी विभाग त कहिले सिंहदरबार घेराउ ओरियन्टल सहकारीबाट पिडित निक्षेपकर्ताको दैनिकी बनेको छ । उनिहरुको गुनासो छ, ठगहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले चासो दिएन । निक्षेप […]
काठमाडाै । फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालहरुले मानिसलाई जति सहज अनुभूति दिएको छ, त्यतिनै दुःख, असहजता र समस्यामा पार्ने गरेको छ । फेसबुकबाट नै कतिले बर्षौ सम्म नभेटेका मिल्ने […]
काठमाडौ ४ जेठ । आउदो असोज १ देखि ५ सम्म इन्डोनेसियाको बालीमा एसियालि ऋण महासंघको आयोजनामा अक्कु फोरम मात्र के हुन लागेको थियो , भ्रमणमा जाने नेपालका सहकारीकर्मीहरुको […]